XOG: Halkee ku danbeeyay Bannaanbixii ay ka digeen Madaxda & taageerayaasha Dowladda.. ? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Halkee ku danbeeyay Bannaanbixii ay ka digeen Madaxda & taageerayaasha Dowladda.. ?
Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa caadi ah iyadoo aan lasoo sheegin bannaanbax ay ka digtay dowladda Soomaaliya oo awood gelisay sidii looga hortegi lahaa.
Ciidamo fara badan ayaa la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan bannaanbaxa oo dowladu ku sheegtay mid sharci darro ah oo rabshado wata, waxaana warbaahinta dowladda ka hadlay saraakiil, siyaasiyiin hore oo taageera dowladda iyo culimada ku xiran Madaxtooyada oo dadka uga digay inay bannaanbax sameeyaan.
Bannaanbaxa ayaa ka socday baraha bulshada oo shaqsiyaad degan Yurub ay olole ugu jireen inuu maanta dhacdo, kadib markii ay arkeen bannaanbxii ka dhashay dilkii Sabtidii hore loo geystay Bajaajle, waxaana xalay baraha bulshada lasoo dhigay ilaa shan qof oo is qariyey kuwaasoo sitay boorar looga horjeedo Madaxweynaha Soomaaliya.
Xogta laga helayo madaxda dowladda ayaa sheegeysa in bannaanbaxa ay ku lug lahaayeen siyaasiyiin caan ka ah Muqdisho oo lacago u qeybiyey dadweyne ku nool xaafado ka tirsan caasimadda, waxaana sirdoonka dowladda ka warheleen in dadka baraha bulshada sawirradooda lasoo dhigay lagu abaabulay guri uu leeyahay xildhibaan ku kacsan madaxda dowladda Federaalka.
Dad badan ayaa is weydiinaya in awoodda la geliyay iyo dadka loo abaabulay ka hortagga bannaanbaxa uu mudnaa iyo inkale, laakiin waxay caddeyn u tahay sida ay u jilcan tahay dowladda oo mucaaradku xilli kasta khalkhal u gelin karaan iyagoo adeegsanaya baraha bulshada.
Bannaanbixii weynaa ee la filayay inuu saaka ka dhaco Muqdisho sida ay dowladda ka digtay ayaa ku soo koobmay baraha bulshada oo dhowr qof ay si toos ah ugu baahinayaan isku soo baxyo hore oo ay ka dhigayeen bannaanbax maanta dhacaya.
Previous articleMadaxweynihii Degaanka Orromada oo loo magacaabay Wasiirka Gaashaandhigga Itoobiya.
Next articleWasiirada Isgaarsiinta Somalia & Dowlad Goboleedyada oo War-muriyeed soo saaray.. [Akhriso]